Manan-kery ao anatin’ny ahiahy mikasika ny vonjy taitra COVID-19 ny lalàna momba ny “vaovao hosoka” ao Malezia · Global Voices teny Malagasy
Nomena fahefana ny polisy hikaroka anaty fitaovana elektronika mandritra ny famotorana
Voadika ny 09 Avrily 2021 4:20 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, English, English
Nanomboka nanan-kery tamin'ny 12 Martsa ny didim-pitsarana 2021 momba ny Vonjy Taitra ao Malezia (Fahefana Ankapobe = Essential Powers) (No. 2), fepetra iray manameloka ny famoahana “vaovao sandoka” mifandraika amin'ny COVID-19.
Nanambara hamehana [mg] ny governemanta Perikatan Nasional (PN) tamin'ny 12 janoary mba hifehezana ny fitomboan'ny tranga COVID-19. Saingy mino ireo mpitsikera fa nikasa ny hampiasa azy io mba hijanonana eo amin'ny fitondrana ny PN matoa nampiato ny fotoam-pivorian'ny parlemanta sy nandràra ny fifidianana. Nampitandrina ihany koa ireo mpikatroka fa mety hitarika amin'ny famoretana ny fahalalahana miteny ilay fanambarana satria namela ny manampahefana hisambotra olom-pirenena sy mpiserasera izay “midikiditra” amin'ny fampiharana ny arofenitra ara-pahasalamana.
Araka ilay didy hitsivolana, ny vaovao faikany dia izay vaovao, fampahalalana, angon-drakitra na tatitra izay diso tanteraka na amin'ny ampahany mikasika ny COVID-19 na ny fanambarana hamehana, na amin'ny endrika fampisehoana, sary na rakipeo na endrika hafa mety hanome teny na hevitra.
Nankato Lalàna Manohitra ny Vaovao Faikany i Malezia talohan'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny taona 2018 saingy nofoanan'ny governemanta Pakatan Harapan teo aloha izany. Mampiditra indray ny lafiny sasany amin'ny lalàna 2018 ny didy hitsivolan'ny PN .
Nampahatsiahy ny governemanta i Zaid Malek, mpandrindra ny Mpisolovava ho an'ny Fahafahana (Lawyers for Liberty) fa tsy lisansa hamoronana lalàna fahatany ny hamehana. Nanamarika ihany koa ity vondrona ity fa ny “fanambarana hamehana” dia tsy voafaritra ao anatin'io didy hitsivolana io. Mampiahiahy ihany koa fa manembatsembana ny fiainana antakonan'ny olom-pirenena ny fahefana polisy fanampiny:
Nanambara ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Aliran fa “afaka mifehy mora foana izay fikasana hanaovana fanairana na fikorontanam-bahoaka ny lalàna misy. Nilaza ihany koa ny vondrona fa mandrahona ny hampisy hantsana bebe kokoa eo amin'ny fiarahamonina io didy hitsivolana io:
Ny Ivotoeram-piheveran-draharaha momba ny demaokrasia sy ny raharaha ara-toekarena dia efa namerimberina ny tsikera tany am-piandohana fa natao hampanginana ny hevitra tsy mitovy ny fanambarana hamehana:
Manana torohevitra ho an'ny governemanta ny mpikambana iray ao amin'ny Parlemantan'i Selayang, William Leong Jee Keen :
Tamin'ny 14 martsa lasa teo, nisy vondron'ireo mpanao fihetsiketsehana izay nisolo tena ny mpikambana ao amin'ny Freedom of Expression Cluster nanao fihetsiketsehana tselatra teo akaikin'ny parlemanta miantso ny hanafoanana io didy hitsivolana io.
Nilaza ihany koa izy fa fepetra vonjimaika io didy hitsivolana io satria azo foanana io rehefa miverina tontosaina indray ny fotoam-pivorian'ny parlemanta ary enimbolana aorian'ny fanesorana ilay fanambarana hamehana.